JW Library App: Kudhaunirodha Mabhuku (iOS) | JW.ORG Rubatsiro
Unogona kudhaunirodha mabhuku akawanda ekuti uzoverenge kana kudzidza paunenge usiri paindaneti.
Baya pakanzi Publications kuti uone mabhuku ose.
Baya kabhatani kemitauro kuti uone mitauro inowanika mabhuku akasiyana-siyana. Mitauro yaunowanzoshandisa ndiyo inenge iri nechepamusoro. Unogonawo kuita zvekutaipa mutauro wacho waunenge uchida.
Unogona kubvisa bhuku kana kuti vhidhiyo kana usisaidi.
Baya pakanzi Publications, wobva wabaya chacho chaunoda kubvisa (semuenzaniso, pakanzi Books) panokuratidza mabhuku. Baya pakanzi Select, wadaro wobaya bhuku kana vhidhiyo yacho. Unogonawo kuramba wakabaya chaunoda kubvisa chacho.Baya Delete, wobva wabvuma kuti uri kuda kubvisa bhuku racho.
Kana uchida kuti tablet rako rive nenzvimbo, unogona kubvisa mabhuku kana mavhidhiyo akakura kana kuti ausingawanzoshandisa. Baya pakanzi Publications, woenda pakanzi Downloaded, wozobaya pakanzi Rarely Used kana kuti Largest Size, wobva wabvisa zvacho zvaunenge usisadi.
Bhuku racho rinenge riine tumaarrow twakadai. Paunoribaya, panobva pabuda mashoko anokuratidza kuti pane zvakagadziridzwa. Baya pakanzi Download kuti rigadziridzwe, kana kuti pakanzi Later kana uchida kuti rirambe rakadaro.
Kana uchida kuona kana paine mabhuku akagadziridzwa, baya pakanzi Publications. Kana paine zvinenge zvakagadziridzwa, panobuda chikamu chakanzi Pending Updates. Baya ipapo kuti uone mabhuku ose akagadziridzwa. Baya bhuku racho kuti rigadziridzwe, kana kuti baya pakanzi Update all kuti mabhuku ose abva agadziridzwa.
Izvi zvakatanga kushanda muna February 2015 paJW Library 1.4, pamidziyo inoshanda neiOS 6.0 zvichikwira. Kana foni yako kana tablet isiri kubudisa izvi, ita zviri munyaya yakanzi “Tanga Kushandisa JW Library​—iOS,” pasi pemusoro wakanzi Wana Zvitsva Zviripo.